पत्रकारिता र अष्टेलिया - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
पत्रकारिता र अष्टेलिया
-- गोपाल छन्त्याल / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, मंसिर ७, २०७५
अष्ट्रेलिया पाइला टेकेको दुई महिनापछि आफ्नै बारे केहि लेख्ने जमर्को गर्दैछु । एक दशक सक्रिय पत्रकारितामा सबै विषय लेखेँ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले बुझ्दै छु, आफ्नो बारे लेख्नै भुलेको रहेछु । आफ्नो बारे लेख्न, कुनै गम्भिर विषय माथि समाचार लेख्नु अघि सबै जानकारी भएपनि ‘कोडिङ पात्र’ नभेटे जस्तै भइरहेको छ । आफ्नै बारे लेख्दा, बेनी छोड्नुको अघिल्लो साँझ याक होटलमा मिडिया सोसाइटीको बिदाइमा पत्रकार घनश्याम खड्का, सन्तोष गौतम, ठाकुर प्रसाद आचार्य लगायतका सहकर्मीले ‘जहाँ गएपनि लेख्ने काम नछोड्नु’ भनेर दिनुभएको सल्लाह झल्झली सम्झिरहेको छु ।
बिदाइको क्षण पीडादायिक त अवश्य हुन्छ नै तर, त्यो क्षण जिन्दगीभर भुल्न नसक्ने क्षण थियो मेरो लागि । व्यवसायिक कर्ममा हामी कति आत्मीय भएका रहेछौँ, एक–अर्कामा कति घुलित भएका रहेछौँ ? भन्ने एउटा प्रतिबिम्ब थियो त्यो । तपाँईहरुसँग यसरी बिदाई हुन पाउनु नै मेरो खुशीको विषय हो । भविश्य कसले पो देखेको छ र ? जहाँ रहेपनि अवश्य सँगै रहनेछौँ । प्रिय सहकर्मीका लागि यति मात्र भन्छु ।
पत्रकारितामा आफुलाई म निकै भाग्यमानी ठान्दछु । छापा, विद्युतीय र अनलाइन सबैखाले सञ्चारमाध्यममा अनुभव हासिल गर्ने मौका मिल्यो । सायद त्यहि भएर होला, मलाई मायाँ गर्ने तीनै खाले शुभचिन्तकहरु हुनुहुन्थ्यो । मेरो वैदेशिक यात्रालाई लिएर सिँगा–तातोपानीका अग्रज दाइ विक्रम बुढाथोकीले स्टाटस लेखेरै भन्नुभयो, ः ‘सधै संभावना देखाउने तपाँई, अनि आफै पलायन हुने ?, यो त सुहाएन भाई’ । नागरिक समाजका संयोजक एबम् मिडिया सञ्चालक सुर्दशन कुमार श्रेष्ठले भिषा लागेको थाहा पाएपछि भेटेरै भन्नुभो, ‘भिषा रद्द गर्नुस्, यहि गरौँ बरु लगानी कति चाहिन्छ भन्नुस्, मैले सहयोग गर्छु ।’ सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ शुभचिन्तकको प्रतिक्रिया एक–एक गरि अध्ययन गरेको छु, सबै प्रति सधै–सधैँ सम्मान छ÷रहिरहने छ ।
विक्रम दाइ र सुर्दशन सरको प्रश्नले मलाई बास्तबमै सोचमग्न बनाएको छ । स्तब्ध तुल्याएको छ । पत्रकारितामा नकरात्मक भन्दा बढी सकरात्मक खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताले जतिसकें सायद विक्रम दाईले भन्नुभए जस्तै, संभावना देखाउने र सकरात्मक परिर्वतन ल्याउने खालका विषयबस्तु उठान गरेँ । सुर्दशन सरले भन्नुभए जस्तै, मिडियाको क्षेत्रमा जिल्लामा ठुलो संभावना देखेर रेडियो, साप्ताहिक, अनलाइन र पछिल्लो समय दैनिक पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको थिएँ । तर, वर्तमान यति शक्तिशाली बनेर आयो की, बिक्रम दाई र सुर्दशन सरको प्रश्नको तत्काल जवाफ दिन असमर्थ भएं । दुबै जना प्रति सरी माग्छु ।
पत्रकारिताबाट के पाएँ ? फर्केर हेर्दा, म जहाँ छु पत्रकारिताकै कारणले छु । वि.स २०६० साल चैत्र ७ को भिडन्तले छेदविच्छेद र उजाडिएको बेनीबजार १५ बर्षमा यसरी हराभरा भएको छ, मानौँ, त्यहाँ युद्धसँगै विकासको बीउ रोपिएको थियो । भीषण भीडन्तको डोबहरु भर्खर ओभाउँदै गएको अवस्थामा पहिलो पटक बेनी झरेको म रेडियोमा बोल्ने, समाचार खोज्ने र लेख लेख्ने असीमित चाहनाको भोको थिएँ । तर, न शुद्ध लेख्थें, न बोल्थें न त कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने कुनै हेक्का थियो । मात्र अतृप्त चाहना थियो । अहिले पनि पूर्ण त भएको छैन ।
तथापि जति छु, गाउँबाट रित्तो झरेको मान्छेका लागि यति पनि काफी हो भन्ने लाग्छ । अवसरको खोजीमा कैयन दिन भोकै बिताएको छु, जसको बदलामा आफैलाई चिन्ने अवसर पाएँ । अप्रिल १ तारिख ‘अप्रिल फुल’ मनाउने दिन । तर, २००९ को अप्रिल १ मेरो लागि पत्रकारितामा व्यवसायिक करिअरको ऐतिहासिक दिन थियो । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण पोष्टले मासिक ४५ सय रुपैयाँ तलब दिने गरि नियुक्ति दिएको त्यो दिन म राम्रोसँग निदाएको थिएन । भोलीपल्ट पत्रिकामा प्रकाशित बाइलाइन (नाम सहित) समाचार हजारौँ पटक हेरेँ हुँला । कटिङ गरेर हप्तादिन सिरानीमा राखेर सुतें । ‘खोप्रालेकमा चौरीगाइको आलो रगत पिउने मेला’ शीर्षकको उक्त समाचारको कटिङ अझै मेरो डायरीमा सुरक्षित छ । त्यसको केहि समयपछि रेडियो म्याग्दीको समाचार कक्षमा काम गर्न अवसर पाएँ । त्यहाँबाट पनि अन्नपूर्ण जत्तिकै पारिश्रामिक पाइने । हरेक बर्ष तलब बढ्दै जान्थ्यो । अहो, दुइतिरबाट तलब आउने त्यो पनि पत्रिकामा आफ्नै नाम र रेडियोमा ‘म गोपाल छन्त्याल…’ भन्दा सबै युद्ध जिते जस्तो भान हुन्थ्यो । सायद त्यही भएर होला दश बर्ष मेरो लागि दश हप्ता जस्तो पनि भएन् । राती २ बजेसम्म समाचार लेखेर बस्थें । पारिश्रामिकका लागि भन्दा पनि बाइन समाचारका लागि । बाइलाइन समाचार छापिएर त्यसको कटिङ फेसबुकमा राख्न पाएको दिन ज्यादै आनन्द लाग्थ्यो ।
नियमित तलब आउने भएपछि मैले आफ्नै अग्रसरतामा जिल्लास्तरमा अन्य समाचारमाध्यम खोल्ने सोच बनाएँ । जसमा कमल खत्री, सन्दीप खत्री, निर्मल खत्री, विपीन छन्त्याल, भरत रकालहरुले विर्सन नसक्ने सहयोग गरे । कमल, सन्दीप र निर्मलको व्यक्तिगत प्रगतिमा सबैभन्दा बढी खुशी हुने एक शुभचिन्तक भित्र पर्छु । पत्रकारिताबाट मैले आफ्नो सानै देखिको चाहना मात्र पूरा गरिंन, आकर्षक आम्दानी पनि गर्दै गएँ । पत्रकारिताले मलाई एउटा पूर्ण व्यवहारिक प्राणी बन्न सिकायो । त्यसको बदलामा मैले पत्रकारिताका लागि कति योगदान दिएँ ? मूल्यांकनको जिम्मा आम पाठक बर्गलाई । पत्रकारिता नगरेको भए सायद यतिबेला कुनै भट्टीमा जाँड ढोक्ने कुलती हुन्थें होला । पत्रकारिताको लतले मलाई उच्च जिन्दगी जिउन सिकाएको छ ।
मेरो बुबाको निधन भएको फागुन १ गते तीन बर्ष हुदैछ । बुबा गाविस अध्यक्ष हुँदा उहाँको समर्थन र विरोधमा नाराबाजी हुने गरेको अलि–अलि सम्झना छ । समर्थन होस र विरोध, घरमा आएपछि बुबाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो ‘सधैँ इमान्दार बन्नुपर्छ, इमान्दार भइयो भने समर्थन गर्नेले पनि गरिराख्छ, विरोध गर्नेले पनि पछि समर्थन गर्छ ।’
मैले पत्रकारिता सुरु गरेपछि गाउँमा मिठाई बाँड्ने र बेनी आएपछि मेरो समाचार खोजी–खोजी घर लैजाने बुबाकै कारण पत्रकारितामा टिक्ने आत्मबल पाइन्थ्यो । आमाको त कुरै नगरौँ, एकदिन रेडियोमा नबोलेको दिन आज के भयो ? भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो । बैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि धर्मपत्नीको सहयोग नहुदो हो त सायद मेरो पत्रकारिता तीन बर्षमै टुगिने थियो । न उनलाई समय दिन सकेको हुन्थें, न बालबच्चाको हेरचाह । मध्यरातमा कोठा पुग्दा आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । तर, उनको मुहारमा गुनासो होइन हौसला झल्कििन्थ्यो ।
म विगत र इतिहासलाई बुझ्छु अनि सम्मान गर्छु तर वर्तमानलाई विश्वास गर्छु । विगत के भन्दा वर्तमान के ? भन्ने महत्वपूर्ण हो भन्ने मेरो सानै देखिको बुझाई हो । हुन त विगतको जगमा वर्तमान बन्ने हो र त्यसैको जगमा भविश्य बन्न सक्ने हो । तर भविश्य कस्तो बन्ने भन्ने अनुमान मात्रै हो ग्यारेन्टी हुदैन, त्यसैले वर्तमान नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । दश बर्ष पत्रकारिता गरेँ, मेरो लागि त्यो विगत भइसक्यो । त्यसैले अब म एक भुपु पत्रकार । मेरो वर्तमान त, प्रवासमा जिवनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको यात्री । विगत भजाएर थुप्रै नाजायज फाइदा लिने एउटा गिरोह, पत्रकारितामा मात्रै होइन् सबै तिर छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।